Maxay DO sameyneysaa? | DO
Soomaali (somaliska) /
Maxay DO sameyneysaa? /
Maxay DO sameyneysaa?
DO waxay ka shaqeysaa in la helo bulsho aan takoorid lahayn. Ula jeeddada shaqadeynu waa bulsho isku xuquuq iyo fursado ahaanshada dadka la ixtiraamayo – iyadoon la eegeynin jinsi, aqoonsi iyo tacbiir jinsi ahaaneed, ka tirsanaasho qolo ahaaneed, diin ama wax kale oo la aaminsanyahay, naafanimo, dabci galmo la xiriira ama da’. Si aannu u gaarno hadafkeenna waxaannu baareynaa xad gudubyada ku aaddan xeerka takooridda. Waxaannu sidoo kale baareynaa shaqada shaqo bixiyayaasha iyo abaabulayaasha waxbarashada ee hadafka ku wajahan si loo xoojiyo isku xuquuq iyo fursado ahaanshada iyo si looga hor tago takooridda.
1. Waxaannu sameyneynaa wax hubin si dad badani ay xeerka u raacaan
Waxaa sanadkii na soo gaara ku dhawaad 2000 oo ashtako, ku dhawaad 200 oo ka mid ahna waxay keenaan hubsiimo la sameeyo. Hubsiino waxay ka dhigantahay in aannu baaritaan sameyneyno si aannu u ogaanno in waxa laga soo ashtakooday ay xeerka takooridda la soconayaan. Hawl lagu sameyn karo hubsiimo waxay tusaale ahaan noqon kartaa shaqo bixiye, degmo, dukaan ama isbitaal.
Waxaannu xitaa sameyn karnaa hubsiimo annaga oo baareyna shaqada hadafka ku jeedda ee shaqa bixiyaha iyo abaabulaha waxbarashada si, si ahaan loo xoojiyo isku xuquuq iyo fursado ahaanshada, si ahaanna looga hor tago, loonana hor istaago takoorid.
Sidee ay hubsiimadu u dheceysaa?
Waxaannu hubsiimada billaabeynaa iyadoo ay sababtu tahay in aannu helnay macluumaad ku aaddan in hawl meel go'an ka socoto ay takoorid ama khatar takooridi ka dhex jirto. Badanaa macluumaadkaas waxaannu ashtako ahaan uga helnaa qof u arka in la takooray.
Billaw ahaan waxaannu la xiriirnaa cidda hawsha mas'uulka ka ah si aannu su'aalo uga weydiinno dhacdooyin gaar ah. Waxaannu sidoo kale weydiinnaa su'aalo ku aaddan siyaasadda ama qaabka shaqada ee aannu u aragno in ay keenaan in takooridu timaado.
Waxaannu tusaale ahaan sameyn karnaa in aannu hubinno
shirkad isticmaaleysa shardi ah in sharci degganaasho oo joogto ah la lahaado, micnaha xeerar keeni kara takoorid xagga codsiyada deegaanka ah
shaqa bixiye intii waqti go'an ah shaqaaleynaya dumar oo keliya
isbitaal aan bukaan dhega la' siineynin turjumaan luqadda dhagoollada ku hadla.
Hubsiimadeennu waxay keeneysaa go'aan
Waxaannu hubsiimadeenna ku soo afjareynaa go'aan ku wajahan hawsha annu baareyno, tusaale ahaan shirkadda guryaha, shaqa bixiye ama isbitaal. Go'aanka waxaannu uga warrameynaa in aannu u aragno in ay u dhaqmeen si xeerka waafaqsan iyo in kale. Waxaannu sidoo kale bixin karnaa talooyin ku aaddan waxa ay tahay in ay sameeyaan si ay mustaqbalkan takoorid uga fogaadaan. Go'aankeennu maaha wax sharci ahaan dadka xiraya laakiin wuxuu sidaas oo ay tahay keeni karaa in meeshu tusaale ahaan ay beddesho xeerka wax takoorayay ama ay billawdo qaab cusub oo shaqo si ay takooridda uga hor tagto.
Shaqadeenna wax la socoshada waxaannu xitaa in yar oo dhacdooyinka ka mid sanadkii maxkamad ula kornaa (ku dhawaan 1 boqolkiiba oo ka mid ah dhammaan ashtakooyinka). Kiiska waxaa wadaya gar yaqaannada DO-ga, waxaana go'aan ka gaareysa maxkamadda.
2. Waxaannu horuumarineynaa aqoon si aannu wax u taageerno, waxna u saameyno
Waxaannu horuumarineynaa aqoon ku addan takooridda annaga oo lafa gureyna, tirakoobna ka sameyneyna ashtakooyinka na soo gaara, annaga oo cilmi baaris sameyneyna iyo annagoo bulshada rayidka la hadleyna. Iyadoo ay aqoontu aasaas noo tahay waxaannu sidoo kale soo saareynaa, horuumarineynaane waxyaabo kala duduwan oo shaqada wax ka taageeraya si loo xoojiyo isku xuquuq iyo fursado ahaanshada iyo si looga hor tago takooridda.
Waxay tusaale ahaan ku saabsanaan kartaa in aannu
soo saarno waxyaabo la lafa guray iyo warbixinno si aannu u wargelinno una saameyno go'aan gaarayaasha
aannu waxyaabo u hormarinno si loo taageero shaqada shaqa bixiyaha ee ku aaddan isku xuquuq iyo fursado ahaanshada
wax barno, macluumaadka bixinno si loo kordhiyo kartida laacibiinta kala duduwan ee ku aaddan in laga shaqeeyo ka hor tagga iyo ogaanshada khatarta ku aaddan takooridda
waxaannu u soo jeedinnaa xukuumadda in xeerarka wax laga beddelo
waxaannu iskaashi la sameynaa he'yadaha kale si loo qaado taallaabooyin la taaban karo.